ကျူးဘားတွင်ခရစ္စမတ်ညစာစားပွဲ Absolut ခရီးသွား
maruuzen | 17/06/2021 22:10 | အဆင့်မြှင့်တင် 17/06/2021 23:12 | ကျူးဘား
La navidad အိမ်မှ၊ ခရီး၊ အားလပ်ရက်နှင့်ဝေးရာသို့သွားရန်အလွန်အထူးအချိန်ဖြစ်သည်။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ, ငါသည်အခြားတိုင်းပြည်, အခြားယဉ်ကျေးမှု၌အားလပ်ရက်ဖြုန်းကိုချစ်။ မင်းကအမြဲတမ်းကွဲပြားနေတယ်။ ဒီတော့ဒီကနေ့ခရစ်ရစ်ကျွန်းမှာခရစ်စမတ်ဘယ်လိုနေထိုင်ခဲ့သလဲ၊ ကျူးဘားတွင်ခရစ္စမတ်ညစာ.
ကျူးဘားသည်ခရစ်ယာန်အစဉ်အလာရှိသောနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်သဖြင့်စပိန်လူမျိုးနှင့်အလွန်ရိုးရာဓလေ့ထုံးစံများကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့လိမ့်မည်။ ဒါမှမဟုတ်မဟုတ်ပါ? ကြည့်ကြရအောင်။
ကျွန်းပေါ်တွင်ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်များစွာရှိသော်လည်းကိုလိုနီသည်ခရစ်ယာန်ဘာသာ၏အားကြီးသောတံဆိပ်ခေါင်းကိုချန်ထားခဲ့သည်။ သို့သော်အာဖရိကမှကျွန်ရောင်းဝယ်မှုသည်စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းပြီး၊ အလွန်ကြီးစွာသောဘာသာရေး syncretismဒါကြောင့်ကျွန်းပေါ်မှာအာဖရိကဘာသာတရားတွေအများကြီးရှိတယ်။
ဥပမာအားဖြင့်၊ santeria, ကိုလိုနီခေတ်တွင်အာဖရိကမှယောက်ျားများနှင့်မိန်းမများပုန်းအောင်းနေရသော Afro-Cubans ကိုးကွယ်မှုသည်ပုန်းအောင်းခြင်း၌လေ့ကျင့်ရမည်ဖြစ်သည်။
ဒီနေ့အချိန်မှာတော့ဒီအတိုင်းမဟုတ်ဘူး၊ Santeria ကကက်သလစ်ဘာသာနဲ့အတူတူနေတယ်။ ဘုရားကျောင်းကက ကျူးဘားလူ ဦး ရေ၏ ၆၀% သည်ကက်သလစ်ဘာသာဝင်များဖြစ်သည်။ ပရိုတက်စတင့်များ၊ ချာ့ချ်အမျိုးမျိုး၊ မွတ်စလင်များ၊ ဂျူးများနှင့်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များလည်းရှိသည်။
ဒါအမှန်ပဲ ကျူးဘားတော်လှန်ရေးကနေဘာသာရေးအလေ့အကျင့်ကန့်သတ်ခဲ့သည် ထိုအချိန်မှစ၍ မည်သည့်ဘာသာကိုမဆိုကိုးကွယ်ရန်မလွယ်ကူခဲ့ပါ။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဆယ်စုနှစ်များကုန်လွန်သွားတာနဲ့ကမ္ဘာ့အပြောင်းအလဲတွေနဲ့အတူဒီအခြေအနေကပြောင်းလဲနေပြီး၊ နိုင်ငံတော်နှင့်ကက်သလစ်ဘုရားကျောင်းအကြားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး အထူးသဖြင့်နှင့်ယေဘုယျအားဖြင့်ဘာသာတရား။
မင်းဘ ၀ မှာမြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့ခရစ်စမတ်ပမာဏ၊ အလှဆင်တာတွေ၊ သစ်ပင်တွေ၊ အလင်းရောင်တွေနဲ့လက်ဆောင်တွေအကြောင်းမင်းစဉ်းစားတဲ့အခါ ... အဲဒါဘယ်လိုလဲ။ ကျူးဘားရှိခရစ္စမတ်သည်မကြာသေးမီကကျင်းပခဲ့သောပွဲတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဟုတ်ကဲ့၊ ပြီးတော့အကြောင်းပြချက်ကကျွန်တော်တို့အရင်အခန်းမှာရှိတာနဲ့ဆက်စပ်နေတယ်။ နှစ်ပေါင်းများစွာကြာအောင်ဘာသာတရားကိုတားမြစ်ထားခြင်းမရှိသော်လည်းလုံးဝအားမပေးခဲ့ပါ။
အမှန်တရားမှာကျူးဘားအများစုသည်နှစ်ကုန်ပိုင်းဘာသာရေးပွဲတော်များကိုလုံးဝဂရုမစိုက်ကြပါ။ အနည်းငယ်သောမကျေနပ်မှုများရှိနေသည့်အချိန်၌ပင်ခရစ်စမတ်၏ဤအပိုင်းသည် ပို၍ ပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်နေပြီး၊ စီးပွားဖြစ်ဖြစ်ရပ် ဘာသာရေးထက်ပိုပါတယ်။ နှစ်ခုလုံး။
အနောက်ကမ္ဘာရှိခရစ္စမတ်သည်အခြားသူများနှင့်မိတ်သဟာယဖွဲ့ခြင်း၊ ကောင်းသောခံစားချက်များနှင့်ဆန္ဒများကိုတစ်ခဏသာတွေ့ကြုံခြင်းမဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည်လက်ဆောင်များ၊ ကုန်ကျစရိတ်များ၊ ၀ ယ်ယူမှုများမှတစ်ဆင့် ... အချိန်ကြာမြင့်စွာတည်ရှိသည်။ ကျူးဘားတွင်ငွေပေါများမှုနည်းသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်စားသုံးသူများကသင့်အားဆင်နွှဲရန်လှုံ့ဆော်ပေးသောပါတီတစ်ခုရှိသည်။ သို့သော်သင့်အတွက်ငွေမရှိပါ။ မကောင်းတဲ့ညီမျှခြင်း။
သို့သော်ခရစ္စမတ်ပွဲကိုငွေမရှိဘဲသုံးခြင်းသည်မှားပါသလား။ ဟုတ်တာပေါ့၊ သင်ငါ့ကိုမေးရင်အမြဲတမ်းအဲဒီလိုဖြစ်သင့်တယ်။ ဒီတော့ဘာကောင်းလဲ ကျူးဘားတွင်ခရစ္စမတ်သည်မိသားစုပြန်လည်ဆုံစည်းခြင်းအကြောင်းဖြစ်သည် မနာလိုသောလက်ဆောင်များဖလှယ်ခြင်းထက်ချစ်ရသူများ၊ သူငယ်ချင်းများနှင့်အရည်အသွေးပြည့်ဝသောအချိန်ကိုကုန်လွန်စေသည်။ ဒါကြောင့်သင်ကရှာနေလျှင် စီးပွားဖြစ်မဟုတ်သောခရစ်စမတ်, ကျူးဘားညွှန်ပြ destination သည်။
ဒါဟာဆိုပါတယ်ခံရဖို့ရှိပါတယ် ဒီနေ့လမ်းတွေပေါ်မှာခရစ်စမတ်စိတ်ဓာတ်ပိုများလာတယ်, အလှဆင်ခြင်းနှင့်ပစ္စည်းပစ္စယအတူ။ ဥပမာအားဖြင့်လူကြိုက်များသည့် Calle Obispo (သို့) Old Havana တွင်အထွေထွေပန်းကုံးများ၌ချိတ်ဆွဲထားခြင်းသို့မဟုတ်ခရစ်စမတ်သစ်ပင်များနှင့်နှင်းဖုံးများစတိုးဆိုင်များတွင်ပေါ်လာသည်။ အပြင်ဘက်တွင်အလှဆင်ခြင်းကိုကြည့်ရှုရန်အလွန်ရှားပါးပြီးအရောင်အသွေးစုံလင်သောမီးထွန်းညှိပွဲများနှင့်အခမ်းအနားများကိုဖော်ပြခြင်းမပြုပါ။ အိမ်နီးချင်းများနှင့်နှုတ်ခွန်းဆက်သခြင်း။ တစ်ခုခုကိုဖြစ်စေ။
အချို့လူများကခရစ်စမတ်သစ်ပင်ကိုသူတို့၏နေအိမ်များတွင်နေရာချကြသော်လည်းလက်ဆောင်များနှင့်လဲလှယ်စရာလက်ဆောင်များမရှိပါ။ ဟုတ်ပါတယ်, သစ်ပင်ရှိသူသည်နွားစားခွက်ရှိသေးသည်။ Santa Claus ကိုဘယ်နေရာမှာမှမတွေ့ရဘူး။ အခြားအရာတစ်ခုခုအတွက်သုံးစွဲနေသည့်ငွေအပြင်ထုံးစံလည်းမရှိပါ။
ဒါ့အပြင်ကကက်သလစ် / ခရစ်ယာန်အားလပ်ရက်ဖြစ်ပါတယ်ပေမယ့် Santeria လေ့ကျင့်သူများသည်များသောအားဖြင့်သူတို့မိသားစုနှင့်အတူထိုအချိန်များကိုအသုံးပြုလေ့ရှိသည်။ ယနေ့ဘာသာတရားနှင့်နိုင်ငံတော်သည်တိုက်ခိုက်ခြင်းမရှိသော်လည်းအမှန်တရားမှာကက်သလစ်အယူဝါဒသည်တော်လှန်ရေးမတိုင်မီရှိခဲ့သောသစ္စာရှိသူအရေအတွက်သို့မပြန်နိုင်ခြင်း၊ ပါတီများ၊ အဖြစ်အပျက်များနှင့်အခြားသူများအတွက်ငွေမရှိခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ပွဲနှင့်အများအားဖြင့်မိသားစုနှင့်ကလေးများကျောင်းမသွားသောကြောင့်အစားအစာများကိုလျှော့ချလေ့ရှိသည်။
အရေးကြီးဆုံးနေ့မှာနှစ်သစ်ကူးအကြိုညဖြစ်ပြီးခရစ်စမတ်ထက်ပိုများသည်၊ ၎င်းကိုအမြဲကျင်းပလေ့ရှိပြီးတားမြစ်ခြင်းမရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ နောက်ပိုင်းတွင်ခရစ်ယာန်လောကအတွင်း၊ အရေးကြီးဆုံးအချိန်ကခရစ်စမတ်အကြိုညဖြစ်သည်အခြားလက်တင်အမေရိကနိုင်ငံများ၌ဖြစ်ပျက်သည်။ ဒီဇင်ဘာ ၂၅ ရက်ထက်ပိုပြီး ၂၄ ၏ညသည်မိသားစုပြန်လည်ပေါင်းစည်းသည့်အချိန်ဖြစ်သည် နှင့် ကျူးဘားတွင်ခရစ္စမတ်ညစာ။
ညစာရိုးရာကျူးဘားအစားအစာနှင့်ဖြစ်ပါတယ် အသုံးအများဆုံးပန်းကန်ဝက်သားဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်၍ မိသားစုကြီးလျှင်တိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်လုံးပင်ချက်ပြုတ်ပြီး၎င်းနှင့်အများအားဖြင့်စားသုံးရသည် ကြော်ငှက်ပျော၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့်ဆန်။ နို့စို့နေသောဝက်လည်းစားသည်။ ဝက်သားကင် ဆန်နှင့်အနက်ရောင်ပဲများ၊
အချိုပွဲများအတွက်ပုံပေါ်ပါတယ် ဆန်သို့မဟုတ်ချိုသောအာလူး pudding, flanတစ်ခါတစ်ရံအချို့ ကောင်းစွာရမ်အတွက်နှစ်ပြီးချောကလက်ကိတ်မုန့်, အရက်မူးမဟုတ်သောရမ်။ အခြေခံအားဖြင့်တော့ပါတီပွဲတစ်ခု၊ အတူတကွစုရုံးခြင်း၊ အစာစားခြင်း၊ သောက်ခြင်း၊ ကခုန်ခြင်း၊
အကယ်၍ လက်ဆောင်များရှိလျှင်ည ၁၂ နာရီတွင်ဖွင့်သည်။ ဒီတော့ည ၉း၁၀ နာရီဝန်းကျင်ကညစာစားမယ်၊ အချိုပွဲ၊ တေးဂီတနဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေကစပြီးလက်ဆောင်တွေကိုဖွင့်ပြီးအစည်းအဝေးကိုဆက်လုပ်ပြီးတဲ့နောက်နံနက်ပိုင်းမှာအဆုံးသတ်သွားတယ်။
သို့သော်လူကြိုက်များသောအခမ်းအနားမျိုးရှိပါသလား။ ဟုတ်ပါတယ်, Parrandas ။ ဒီဇင်ဘာ ၂၄ ရက်ကျင်းပသည် ပါတီများသို့သော်သူတို့သည်ခရစ်စမတ်နှင့်မသက်ဆိုင်ပါ။ သူတို့သည်ခရစ်စမတ်အကြိုညတွင်သာကျရောက်ပြီးနောက် ပို၍ လူကြိုက်များလာသည်။ လူကြိုက်အများဆုံးမှာမီးရှူးမီးပန်းများနှင့်အတူ Parrandas de Remedios ဖြစ်သည်။ ထိုသူတို့ကအရမ်းလှ, အရမ်းလှ၏ ယူနက်စကို သူ၏စာရင်းထဲတွင်သူတို့ကိုထည့်သွင်းခဲ့သည် လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်၏ Intangible အမွေအနှစ်။
မင်းမြင်တဲ့အတိုင်း ခရစ်စမတ်သည်ကျူးဘားသို့သွားရန်မခက်သောအချိန်မဟုတ်ပါ။ အခြားနေရာများကဲ့သို့ကမ္ဘာသည်ရပ်တန့်မသွားပါ။ ၎င်းသည်စီးပွားဖြစ်မဟုတ်ဘဲအလွန်လူမှုရေးဖြစ်သည်။ ခရစ္စမတ်ညစာစားခြင်းသည်အလွန်ရိုးရာဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်ကကျူးဘားမိသားစုနှင့်အတူမျှဝေရန်ကံကြမ္မာရှိပါကသင်ကောင်းစွာစားနိုင်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Absolut ခရီးသွားခြင်း » ကျူးဘားတွင်ခရစ္စမတ်ညစာ